जिम नजाने ऐश्वर्या ४७ वर्षसम्म कसरी भइन् फिट ? - Nepaliraibar
जिम नजाने ऐश्वर्या ४७ वर्षसम्म कसरी भइन् फिट ?
प्रकाशित मितिः २०७८ जेष्ठ २४, सोमबार
काठमाडौं । बलिउडकी सुन्दर अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चनको सुन्दरताले धेरैलाई लोभ्याउँछ । ऐश्वर्याको सुन्दरताले मानिसलाई मोहित मात्र बनाउँदैन उनको सुन्दरतालाई देखेर धेरैजना अचम्मित पनि पर्ने गरेका छन् । उनी एक छोरीकी आमा पनि हुन् ।
उमेरले ४७ वर्ष टेकेकी ऐश्वर्या जिम पनि जाँदिनन् । तर, उनी कसरी यति फिट रहिन् ? ऐश्वर्या फिट रहनका लागि नियमित रुपमा योगा गर्ने गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरुमा उल्लेख छ । उनी डाइट चार्ट पनि नियमित रुपमा फलो गर्छिन् ।